अर्थ Archives - Page 19 of 21 - Paschimnepal.com
मह खान जाजरकोट जाऔं !
मह मन नपर्ने कमै होलान् । खाँदा मिठो मात्र होइन मह स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण छ । महमा धेरै औषधिय गुण हुन्छन् । तर, अचेल मह पाउन सजिलो छैन । अझ शुद्ध र अर्गानिक मह पाउनु त आक्कलझुक्कल जस्तो मात्र भइसकेको छ । अग्र्यानिक मह उत्पादनको उर्वर थलो जाजरकोटमा यस वर्ष मह मह महोत्सव हुँदैछ । यो वर्षलाई मह वर्षको रुपमा मनाउने तयारी गरिएको हो । कात्तिकको अन्तिम हप्तादेखि मंसिरको पहिलो हप्त
पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न होटल व्यवसायीले देउसीभैलो खेल्ने
प्रदेश नम्बर ६ का पर्यटन स्थलहरुको प्रचारप्रसार गर्न सुर्खेतका होटल व्यवसायीहरुले देउसी भैलो खेल्ने भएका छन् । यही कार्तिक १४ र १५ गते होटल व्यवसायी संघ सुर्खेतको आयोजनामा देउसी भैलो खेल्ने भएका हुन् । होटल व्यवसायीको काम कमाउनु मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायितर्फ पनि अग्रसर छ भन्ने सन्देश दिन आफूहरुले कार्यक्रमको अयोजना गर्न लागेको होटल व्यवसायी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष तर्कबहादुर शाहीले जानकारी
Oct202016 by Paschim NepalNo Comments
परिचयपत्र दिएर मात्रै गरिवी अन्त्य हुँदैन : मन्त्री थानी
प्रकाशित मितिः बिहिबार, कार्तिक ४, २०७३ |
गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरु आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत नभएको दुखेसो सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय आफैले मात्र युवा स्वरोजगार कोष चलाएकोले यसबाट लक्षित वर्ग सधैँ उपेक्षित भएको तर्क मन्त्री थानीको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले आफै प्रोजेक्ट चलाउने होइन’ उनले पश्चिम नेपालसंग कुरा गर्दै भने, ‘कम्तिमा गरिवी निवारणसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु एकद्धार
सुर्खेतका होटलमा ठुलो लगानी
ठूला सुविधासम्पन्न होटलको अभावका कारण वीरेन्द्रनगर हुने क्षेत्रीयस्तरका अधिकांश कार्यक्रमहरु नेपालगञ्जमै आयोजना गरिन्थे । व्यापारिक, राजनीतिक चहलपहल नहुँदा ठूलो लगानीमा होटल सञ्चालन गर्न व्यवसायी डराइरहेका अवस्था थियो । तर, पछिल्लो समय ठूला एवं सुविधासम्पन्न होटलहरु खुल्ने क्रम बढेको छ । स्थलमार्ग हुँदै कर्णाली जाने यात्रुहरु बढ्नु र सुर्खेत–काठमाडौं सिधा हवाई सेवा सञ्चालन हुनुले उत्साही भएका व्य
रु. १० र २० का नयाँ नोट अभाव
दशैका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट कम पठाएपछि सल्यानका बजारमा १० र २० रुपैयांका नयाँ नोटको अभाब भएको छ । बैंकहरुले समेत २० रुपैयाँका नयाँ नोट नभएको बताएपछि दशैँमा नयाँ नोट लिन नपाएको गुनासो नागरिकहरुको छ । यो बर्ष राष्ट्र बैंकले२० रुपैयाँ दरका २१ करोड थान नयाँ नोट छापेको थियो । तर चाहेजति नोट बितरण नगर्दा २० र १० रुपैयाँका नयाँ नोटको बजारमा अभाव भएको हो । शारदा नगरपालिका ४ साहुटोलका ब्या
Oct42016 by Paschim NepalNo Comments
लघुवित्तका नाममा धनीलाई संरक्षण नगरौं : लघुवित्त विज्ञ श्रेष्ठ
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, अशोज १८, २०७३ |
नेपालमा सञ्चालन भएका लघु वित्त कार्यक्रमका नाममा धनी व्यक्तिको संरक्षण गर्ने कार्य रोक्नु पर्ने लघुवित्त कार्यक्रमका संस्थापक एवं लघुवित्त बिज्ञ शंकरमान आचार्यले बताएका छन् । गरिव, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित लघुवित्त कार्यक्रम पछिल्लो समय धनी व्यक्तिहरुलाई पोस्ने खालका भएकाले यस्ता गतिविधि रोक्नु पर्ने तर्क उनको छ । सेवामुलकभन्दा नाफामुलक रुपमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा आपत
बैंकमा रकम सकियो सेवाग्राही मर्कामा
एक मात्र सरकारी नेपाल बैक लिमिटेड जाजरकोट शाखामा रकम अभाव भएको छ । बैकमा रकम सकिएपछि सेवाग्राही रित्तै फर्कन बाध्य भएका छन् । सरकारी कार्यालयको कारोवार हुने एक मात्र बैक नेपाल बैक लिमिटेड भएकोले पनि रकम सकिएको हो । रकम सकिएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । करीव २ हजार शिक्षकको दशै पेश्की र चार महिनाको तलब, निजामति कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायतको दशै खर्च सहित २ महिनाको तलवभत्ता एक
विद्युत लाइन काट्दा १७ लाख बक्यौता उठ्यो
नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र घोराहीले विद्युत महशुल नबुझाउने ग्राहकको लाईन काट्न थालेपछि बक्यौता रकम संकलन भएको छ । एक महिनाको विचमा केन्द्रले ७० भन्दा बढी ग्राहकको लाईन काटेपछि करिब १७ लाख रुपैयाँ बक्यौता उठेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र घोराहीले जानकारी दिएको छ । लमही र घोराही क्षेत्रका ग्राहकबाट १६ लाख ९४ हजार ५ सय ४७ बक्यौता रकम संकलन भएको वितरण केन्द्रका सुचना अधिकारी खेम